Fitaovana fandroana sy fidiovana ho an'ny orinasa sy olon-tokana | WillieJan
Tanana fandroana sy fandroana
Mpihazona lamba famaohana
Famafana varavarankely - soloina fitaratra
Radiator lamba famaohana lamba famaohana
Radiator lamba famaohana andry
Fitaratra miharatra - Manamboatra fitaratra
Fako fako ho an'ny akanjon'ny Ladies
Mpanamboatra lamba famaohana taratasy
Kitapo fanombohana lamba famaohana taratasy
Fandroana sy faritra maromaro
Mpitifitra bidet | Kitiho ny kojakoja fandroana tanana
Fehikibo mihantona ho an'ny fandroana tanana
Fehikibo mihantona ho an'ny ranonorana mivatravatra
Paoma fandroana | Paompy mandro
Ampio ary zarao ny paompy
Pipe mixer mixer
Farango lamba famaohana
Fitaovana lamba fandroana
Kitapo misy lamba fidiovana
Fampahalalana ny kaonty
Lahatsoratra 0€ 0.00
✅ WillieJan® NL Marika
✅ Mpanafatra Marplast
✅ Antoka famerenam-bola
✅ Fandefasana haingana
✅ Serivisy ho an'ny manam-pahaizana manokana
Inona no tadiavinao.....
WillieJan Radiator lamba famaohana lamba famaohana 90MW - Fotsy - tsorakazo 5 - 46 cm - Fametahana taratra - Tsy misy fandavahana
fankasitrahana 4.75 avy amin'ny 5
€ 53.00 anisan'izany ny VAT
Ianao koa ve mandro amin'ny maraina ary rehefa maina dia tsikaritrao fa mbola matsoka sy lena ny lamba famaohana? Avy eo ity talantalana ity no vahaolana ho anao. Ahantony eo amin'ny radiatoranao ny lamba famaohana mando dia ho mafana sy maina foana izy ireo. Milamina ihany koa ary ny talantalana dia azo apetaka amin'ny radiator famolavolana ny fandroana tsy misy fandavahana.
WillieJan Radiator lamba famaohana lamba famaohana 950W - Fotsy - tsorakazo 1 - 46 sm - fametahana taratra - Tsy misy fandavahana
fankasitrahana 5.00 avy amin'ny 5
€ 38.00 anisan'izany ny VAT
Ianao koa ve mandro amin'ny maraina ary rehefa maina dia tsikaritrao fa mbola mifikitra sy mando ilay lamba famaohana? Avy eo ity talantalana ity no vahaolana ho anao. Ahantony eo akaikin'ny taratrao ilay lamba famaohana lena mba ho mafana sy maina foana izy. Milamina ihany koa ary ny talantalana dia azo apetaka amin'ny radiator famolavolana ny fandroana tsy misy fandavahana.
WillieJan Diverter Tap Shower - Chromed Brass - haben'ny fifandraisana 3 x 1/2 ″
€ 33.00 anisan'izany ny VAT
Mora ny mampifandray vokatra 1 amin'ny paompy 2. Azonao atao ny manova ny paompy (avy amin'ny fivoahana iray mankany amin'ny iray hafa). Saika ny paompy fandroana rehetra any Pays-Bas sy Belzika dia misy kofehy 1/2 hanodinana ny fantsom-pandroanao. Azonao atao ny mametraka ny valizy diverter eo anelanelany mba hanana fifandraisana 2 ianao. Azafady mba refesio alohan'ny handefasanao (jereo ny sarin'ny habe)
Dispenser lamba famaohana taratasy marplast A59211 - fotsy - mahazaka - lamba 600 - ho an'ny C, Z ary lamba famaohana miforitra mifangaro
Dispenser lamba famaohana taratasy misy fatrany lehibe hatramin'ny 600 ravina. Mety amin'ny Z, C ary lamba famaohana vita amin'ny taratasy mifangaro miaraka amin'ny halaliny mivalona hatramin'ny 12 cm ary ny sakany hatramin'ny 25 cm.
WillieJan Radiator lamba famaohana lamba famaohana 940W - Fotsy - tsorakazo 1 - 36 sm - fametahana taratra - Tsy misy fandavahana
fankasitrahana 4.83 avy amin'ny 5
Dispenser lamba famaohana taratasy marplast A83010ENE - Mainty - mahazaka - lamba 600 - ho an'ny lamba famaohana Z, C ary V
€ 51.00 anisan'izany ny VAT
Dispenser lamba famaohana taratasy misy fatrany lehibe hatramin'ny 600 ravina. Izy io dia mifanentana amin'ny servieta taratasy Z, C ary V miampita miaraka amin'ny halaliny mivalona hatramin'ny 12 cm ary ny sakany hatramin'ny 25 cm.
Dispenser savony marplast A71401NE - kalitao matihanina - Mainty misy mangarahara - 550 ml - Mety amin'ny faritra be olona
€ 41.00 anisan'izany ny VAT
Mpamatsy savony matihanina tena mafy orina, mora averina refes amin'ny fandrarahana savony etsy ambony.
WillieJan lamba famaohana multi vy vy
€ 73.00 anisan'izany ny VAT
Fehikibo lamba fampiasa multifunctional lehibe vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny borosy. Tsy latsaky ny tehina 7 hanantonana ny lamba famaohana rehetra sy / na hametrahana azy eo amboniny. Ny famaohana lamba famaohana dia azo apetaka mora amin'ny rindrina mba ho madio ny lamba famaohana ary afaka rivotra sy maina.
WillieJan lamba famaohana tarika WillieJan 7061 - mainty - dispenser lamba famaohana + servieta taratasy 600
€ 57.00 anisan'izany ny VAT
Kitapo fanamoriana lamba famaohana vita amin'ny lamba misy famaohana lamba famaohana tanana + lamba famaohana miisa 600. Vonona amin'ny indray mandeha ary azonao antoka fa manana servieta tànana ankavanana ianao.
WillieJan Bath mat - Mainty - 50 x 80 - Microfiber
€ 28.00 anisan'izany ny VAT
Toeram-pandroana microfibre malefaka feno korontam-bato feno tsara miaraka amin'ny farany anti-slip. Haben'ny malala-tanana 50 x 80 cm.
WillieJan starter dia nametraka lamba famaohana taratasy JF7003 - plastika ABS - Mainty - Dispenser servieta + 798 servieta taratasy
€ 48.00 anisan'izany ny VAT
Kitapo fanamoriana lamba famaohana vita amin'ny lamba misy famaohana lamba famaohana tanana + lamba famaohana miisa 798. Vonona amin'ny indray mandeha ary azonao antoka fa manana servieta tànana ankavanana ianao.
WillieJan starter nametraka lamba famaohana taratasy JF7002 - ABS plastika - Fotsy - Towel dispenser + 798 servieta taratasy
WillieJan starter nametraka lamba famaohana taratasy JF7001 - Matt stainless vy - Towel dispenser + 798 servieta taratasy
€ 83.00 anisan'izany ny VAT
Kitapo fananganana lamba famaohana vita amin'ny lamba misy famaohana an-tànana vita amin'ny tanany tsy misy fangarony + lamba famaohana 798. Vonona amin'ny in-1 mandeha ary azonao antoka fa manana servieta tànana ankavanana ianao.
WillieJan Fako kobam-behivavy Pads sy Tampons - fahadiovan'ny vehivavy - vy tsy misy pentina - Fametahana rindrina - votoaty 5 litatra
Biby fanariam-pako tena azo ampiharina sy madio hanariana tampons sy servieta fidiovana rehefa mitsidika ny trano fidiovana ho an'ny vehivavy. Ho an'ny fametrahana rindrina
WillieJan Ladies Hygiene Pouch Dispenser – Stainless Steel – Satin vita
Dispenser vy tsy misy pentina hanantonana harona plastika ao amin'ny trano fidiovana vehivavy eo akaikin'ny dabam-pako mba hametrahana tampons sy servieta fidiovana ao anaty dabam-pako.
WillieJan servieta servieta - ABS - Matt mainty - ho an'ny lamba famaohana 600
Dispenser ho an'ny lamba famaohana taratasy miaraka amin'ny fahafaha-manao lehibe hatramin'ny 600 takelaka. Ity dia mifanaraka amin'ny Z sy V-foritra lamba famaohana taratasy miaraka amin'ny halaliny mivalona hatramin'ny 11 cm ary ny sakany hatramin'ny 24.5 cm.
WillieJan mpanaparitaka lamba famaohana - ABS - Fotsy - ho an'ny lamba famaohana 600
Mpizara lamba famaohana WillieJan - vy tsy misy pentina - vita amin'ny satin - ho an'ny lamba famaohana 600
Mpanary vy tsy misy fangarony ho an'ny lamba famaohana taratasy miaraka amin'ny fahafaha-manao lehibe hatramin'ny 600 takelaka. Ity dia mifanaraka amin'ny Z sy V-foritra lamba famaohana taratasy miaraka amin'ny halaliny mivalona hatramin'ny 11 cm ary ny sakany hatramin'ny 24.5 cm.
Selika WillieJan Shower 16570 - 150 cm - vy vy
€ 8.00 anisan'izany ny VAT
Hose fandroana kalitao mety amin'ny fampifandraisana ny lohanao fandroana, ny ranonorana misy anao na ny fandroana tànanao mametaka.
WillieJan servieta taratasy mivalona - tery lamosina - 2 ply - Premium Cellulose - 4 x 150 sekely
€ 14.00 anisan'izany ny VAT
Manolo ny lahatsoratra 99535A300, mifanentana amin'ny dispenser servieta marivo avy amin'ny Marplast, ankoatra ny hafa; Servieta vita amin'ny taratasy-ply marokoroko vita amin'ny selulose madio. Aforitra indroa ireo ka ny lamosina dia 2 sm fotsiny ny sakany ka tafiditra ao anaty dispenser tsy dia lalina loatra. Rehefa mivelatra dia manana habe lehibe 2 x 8 sm ny lamba famaohana ka ampy hamelana hamandoana be dia be.
Soso-kevitra & Vaovao
Inona no azonao atao amin'ny lohan-dranon'orana aorian'izay?
13 Oktobra | Torohevitra momba ny fahadiovana
Inona no azonao atao amin'ny lohan-dronono mitete? Ny loha fandroana matetika dia mitete rehefa avy ary na dia efa ela aza aorian'ny fampiasanao azy. Azonao atao ny mamaky izay azonao atao momba an'ity ato amin'ity lahatsoratra ity. Ny lohan-daboara dia misy efitrano malalaka manoloana azy ilana hampielezana ireo fiaramanidina. Mampalahelo fa manana fatiantoka izany raha toa ka manidy ny paompy misy rano ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ianao ...
Ireo mpaninjara lamba famaohana taratasy miverina amin'ny tahiry
Martsa 21 | Torohevitra momba ny fahadiovana
Ireo mpaninjara lamba famaohana taratasy dia miverina mitazona entana hatramin'ny omaly dia misy tahiry mpaninjara lamba famaohana taratasy indray. Miezaha haingana fa misy ny fangatahana be dia be amin'ny vokatra mampihena ny mety hampitana ny fahitana corona. Mikasika ireo vokatra entinay ity; Mpaninjara savony; Sasao tanana sy ...
Tsy fahatomombanan'ny viriosy Corona
Martsa 04 | Torohevitra momba ny fahadiovana
Ny tsy fahampian-tsakafo maharitra noho ny Virus Corona Noho ny virus corona na ny virus COVID-19, dia misy ny filana lehibe amin'ny vokatra izay mampihena ny mety ho fandotoana. Noho ny fangatahana betsaka dia tsy afaka niatrika ny famokarana ny taona 2020. Mandritra izany fotoana izany dia nihena ny fangatahana ary antenainay fa haverina tsy ho ela ny tahirin'ireo entana ireo ...
Apetaho mihantona fitoeram-pidiovana
24 Janoary | Aiza no ahantonako ny kojakojam-pandroako?
Toerana ahantona mpihazona fantsom-pikatsoana Raha ny tena izy dia tsy misy lalàna raikitra momba ny fanantonana mpihazona fidiovana Ny zava-dehibe indrindra dia ny hoe eo am-pipetrahana eo amin'ny toeram-pivoahana dia mety ho tratra ilay horonan-taratasy ary azo vahana rehefa mipetraka. Tsy tokony hanelingelina azy koa izany. Amin'ny fampiharana, midika izany fa tsara kokoa ny manaisotra ny axis an'ny ...
Apetaho eo amin'ny vavahadin'ny trano fidianao ny faritry ny fitafianao
Desambra 21 | Torohevitra ho an'ny efitrano fidianao
Fametahana farango lamba eo amin'ny vavahadin'ny trano fidianao Misy fandroana kely na fandroana kely misy anao. Na izany aza, te-hanantona tsara ny akanjonao ianao rehefa misasa na misasa. Ny hevitra marani-tsaina dia ny fametrahana farango eo am-baravaran'ny efitrano fidiovana. Inona no tokony hojerenao rehefa mividy sy / na mametraka ny farango fitafiana; Ny ...
dispenser savony amin'ny rindrina
Desambra 06 | entana
Mividy mpaninjara savony vaovao amin'ny rindrina? Ho an'ny rindrin'ny dispenser vaovao dia tonga amin'ny toerana mety ianao ao amin'ny WillieJan. Samy manana mpamatsy savony vita amin'ny plastika sy vy avo lenta ho an'ny rindrina izahay. Mpivarotra savony amin'ny rindrina amin'ny endrika sy loko isan-karazany. Na ho an'ny fampiasana manokana na ho an'ny matihanina mahery ....
Torohevitra sy vaovao
Fampahalalana momba ny fandefasana sy ny fandoavam-bola
Zo ny fialana
Warranty & fitarainana
2004 - 2022 © WillieJan | WillieJan® dia mari-pamantarana voasoratra anarana ao amin'ny Bathweb
Ny fankasitrahana ny www.williejan.com ao amin'ny Webshop Keurmerk Fanamarihana ho an'ny mpanjifa dia 9.4 / 10 miankina amin'ny 233 hevitra.
Ao amin'ny lisitry ny hovidiana